अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विज्ञ डा. रत्नाकर अधिकारी विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गतको इनह्यान्स्ड इन्ट्रिग्रेटेड फेमवर्क (ईआईएफ) का कार्यकारी निर्देशक हुन् । ईआईएफले नेपालसहित विश्वका सबै अल्पविकसित देशको व्यापार अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्दै आएको छ ।
बिमा व्यवसायमा नयाँ कम्पनी थपिएसँगै बिमाको पहुँच १७ प्रतिशत पुगेको छ । नयाँ कम्पनीको प्रतिस्पर्धाले बिमाको पहुँच वृद्धि भए पनि बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको र यसले समग्र बिमा व्यवसायलाई नै बदनाम गराउने जोखिम बढेको औंल्याउँछन् महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत रमेशकुमार भट्टराई ।
बजेटबारे प्रदेश २ का उद्योगी व्यवसायीका सुझाव
अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार प्रदेश नं. २ को वीरगन्जमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटको राजस्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी छलफल तथा अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा प्रमुख अतिथि रहेको उक्त अन्तक्र्रियामा उद्योगीहरूले नेपालगन्जमा फलेको सामान वीरगन्ज ल्याउन विभिन्न झन्झटहरू बेहोर्नुपरेको गुनासो गरे । भारतको दिल्ली पु-याएर दिल्लीबाट वीरगन्जमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु दुःखद रहेको भन्दै उनीहरूले यसको सहजताका लागि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
मुलुकका ३ सयभन्दा बढी विज्ञापन एजेन्सीको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजाल (शशी) २०४७ सालदेखि यस व्यवसायमा आबद्ध छन् । विज्ञापनका क्षेत्रमा झन्डै तीन दशक लामो अनुभव संगालेका रिजाल गत वर्षको माघदेखि आनको नेतृत्वमा छन् । मनोविज्ञान विषयमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका रिजाल विज्ञापनका क्षेत्रमा भने निकै अनुभवी र जानकार व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । आफूलाई सूचनाको हकसम्बन्धी अभियन्तासमेत भन्न रुचाउने रिजाल नेपालमा सूचनाको हकको विषयलाई स्थापित गराउन पनि आफ्नो सक्रिय भूमिका रहेको बताउँछन् ।
मधेसी, आदिवासी–जनजातिलगायतको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दलको असन्तुष्टिका बाबजुद संविधान घोषणापछि बनेको सरकारबाट आमजनताले देशमा केही सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा राखेका थिए । निर्वाचनपछि गठन भएको दुइतिहाई बहुमतको सरकारबाट अझ धेरै अपेक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधानको पहिलो संशोधन गरेको भए पनि त्यसले संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई पूरा नगरेको भन्दै मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
मानिसका लागि शारीरिक स्वच्छता कायम गर्न लागि दैनिक रूपमा दूध पिउनु निकै लाभदायक मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले विश्वका नागरिकहरूको खानपानको अवस्थालाई मध्यनजर गरे सो देशको नागरिकले वर्षमा औसत कति लिटर दूध उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यांक नै निकालेको हुन्छ । एफएओका अनुसार नेपालको हकमा एक स्वस्थ मानिसले वर्षमा ९२ लिटर दूध खानुपर्ने हुन्छ । नेपालकोे प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति दुग्ध उपभोग ७२ लिटर छ । वार्षिक ४ प्रतिशतका दरले दूधको उत्पादन र ८ प्रतिशतका दरले दूध तथा दुग्ध पदार्थको माग रहेको तथ्यांक नेपालमा छ । यस अर्थमा बर्सेनि दूधको उपभोग बढ्दो दरमा छ । नेपालमा प्रतिदिन ५० लाख लिटर दूध उत्पादन र खपत भइरहेको अनुमान छ ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य भएपछि ५ लाखभन्दा माथिको कारोबारमा कमी आएको भए पनि समग्र सेयर बजार भने सकारात्मक नै देखिएको छ । प्यान लागू गरिएपछि सेयर बजार परिसूचक पनि निरन्तर सुधारको गतिमा देखिएको छ । प्यान लागू भए पनि बजार झनै प्यानिक हुने मनोविज्ञानले लगानीकर्तालाई सताएको भए पनि वास्तविकता भने उल्टो देखियो । २०७६ वैशाख १ गतेदेखि लागू भएको ५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको कारोबारमा प्यान अनिवार्य गरिएपछि साना तथा मझौला लगानीकर्ता भने उत्साहित भएको देखिन्छ ।
एकले एकपटक होइन, सयौंले सयौं पटक, आजबाट होइन, वर्षौं अघिदेखि भन्दै आएका छन्— सुदूरपश्चिमको समृद्धिको पाँच आधार कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, पूर्वाधार र जडीबुटी हुन् । उता सुन्दर सुदूरपश्चिमको बयान गरिसाध्य छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्रकृतिले नै सुन्दरताको आशीर्वाद र सम्भावनाको वरदान दिएको छ । विगतमा विकास भनिए पनि संघीयतामा समृद्धि भन्न थालिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका डिल्लीराम अधिकारी तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा इन्जिनियरका रूपमा प्रवेश गरेका हुन् । १६ वर्षअघि संस्थामा प्रवेश गरेका उनी यतिबेला सोही कम्पनी हाँक्ने ठाउँमा पुगेका छन् । २०६५ मा वरिष्ठ इन्जिनियर, २०७० मा उप–प्रबन्धक र २०७५ वैशाख १६ देखि प्रबन्धक भई कम्पनीका विभिन्न निर्देशनालय र विभागको काम उनले गरिसकेका छन् ।
पानीबिनाको जीवन जिउन असम्भव छ । अपरिहार्य हो पानी, तर पनि खानेपानी समस्या निकै जटिल छ अझै पनि । राजधानी काठमाडौं उपत्यकामै पानीको समस्या छ । खानेपानी गुणस्तरीय छैन । स्वच्छ पानी पिउन पाउने मानिसको मौलिक हक भनेर संविधानमा उल्लेख छ । तर, कहिले पाउलान् सर्वसाधारणले आफ्नो मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न ? पानीको समस्या धेरै ठाउँमा छ । पानीको समस्याका कारण कति सर्वसाधारणको जनजीवन पनि कष्टकर बनिरहेको छ ।
१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएर चालू आर्थिक वर्षका लागि समृद्धिको आधार वर्ष घोषणा गरेको सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न जुटेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ बाहिर नगए सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटको आकार १५ खर्बको हुनेछ । सोही सिलिङका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई हम्मे–हम्मे मात्रै भएको छैन, यसले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म जम्मा ३५ प्रतिशत विकास खर्च गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै पनि दुईतिहाइको दम्भ देखाएर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिन नसकेको अर्थशास्त्री विश्व पौडेल बताउँछन् ।
‘यो रेडियो नेपाल हो, अर्जुनबहादुर थापाबाट समाचार सुन्नुहोस् ।’ विद्यार्थी जीवनमा एक वर्षसम्म यो वाक्य भट्याएका थापा कहिल्यै समाचारवाचक बनेनन् । बरु यसले उनलाई राजनीतिमा होमिन नेतृत्वशैली विकास गर्ने भोक, चाहना र आदत बसायो । शिक्षकबाट राजनीतिमा होमिएका थापा अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख छन् । थापा भन्छन्, “केटाकेटी छँदा नेपाली रुपैयाँ नचिन्ने अवस्थाको थिएँ, अहिले प्रदेश सभामुख छु ।
उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सतिशकुमार मोर यसअघि परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए । १५ वर्षदेखि परिसंघमा आबद्ध रहेका मोर पूर्वाधारजन्य उद्योगमा लगानी गर्ने अग्रणी उद्योगपतिका रूपमा चिनिन्छन् । क्लिंकर तथा सिमेन्ट उद्योग, खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको अन्वेषण र उत्खननसँग सम्बन्धित उद्योग, खाद्य तथा वनस्पति घिउ–तेल उद्योग, विद्युतीय तार तथा सोसँग सम्बन्धित मटिरियल्स र पीभीसी पाइपलगायतका उत्पादनमूलक उद्योगसँग उनी सम्बद्ध छन् ।